कान्तिपुर नगरीका ताजा समाचारहरु
Home > नेपाली समाचारहरु > खेलकुद > खाली खुट्टै दौडेर सीमाले जितिन् कास्य
Kantipur Samachar December 26, 2016 खेलकुद	0
तस्बिरः अनिश रेग्मी
एकातिर चार महिनाअघि रियो ओलम्पिकमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएर फर्किएकी सरस्वती भट्टराई, अर्कातिर नेपाली सेनाकी जब्बर खेलाडी सानुमाया कार्की। बीच ट्रयाकमा सुदूरपश्चिमकी १५ वर्षीया सीमाकुमारी चौधरी।
इटहरीको निर्माणाधीन रंगशालामा सोमबार एथलेटिक्सअन्तर्गत ८ सय मिटर दौडमा सुदूरपश्चिमकी सीमाकुमारीलाई ट्रयाकमा देख्दा कसैले पत्याएका थिएनन्, उनले यो स्पर्धामा पदक जित्छिन् भनेर।
तर, नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्रको तीन विभागीय टोलीका एकसे एक खेलाडी समावेश यो स्पर्धामा कास्य जितेर सीमाले सबैलाई चकित तुल्याइन्। उनको सफलता यस कारण पनि विशेष छ, किनकि उनले खाली खुट्टै विभागीय टिमका यी खेलाडीलाई उछिनेर आफूमा प्रचुर सम्भावना भएको स्थापित गरेकी हुन्।
विभागीय लगायत अन्य टिमका खेलाडीले महंगा ‘स्पाइक’ लगाएर दौडिरहेका बेला खाली खुट्टै उनले ५ खेलाडीलाई पछाडि छाडिन्। उनको क्षमता देखेर अचम्म परेकी ओलम्पियन धाविका सरस्वतीले नजिकै पुगेर उनलाई बधाई दिइन्। सेनाकी सरस्वतीले यो स्पर्धामा स्वर्ण जितेकी थिइन्।
टीकापुरको राजीपुरमा अरूको घर बनाउँदै हिँड्ने मिस्त्रीको घरमा जन्मिएकी सीमा आर्थिक अभावका कारण एथलेटिक्समा प्रयोग गरिने ‘स्पाइक’ नलगाई खाली खुट्टै ट्रयाकमा ओर्लिएकी थिइन्।
उनी सातौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत एथलेटिक्सतर्फ खाली खुट्टा खेलेर पदक जित्ने पहिलो खेलाडी बन्न पुगेकी छन्। उनले ८ सय मिटरको दुरी २ मिनेट ३४ सेकेन्डमा पूरा गरेकी थिइन्। यो रेकर्ड सेनाकी ओलम्पियन खेलाडी सरस्वतीभन्दा केही सेकेन्ड टाढा भए पनि खराब थिएन। सरस्वतीले २ मिनेट १९ दशमलव ४२ सेकेन्डमा दुरी पूरा गरेकी थिइन्। रजत जितेकी सेनाकी सानुमायाले २ मिनेट २५ दशमलव ५६ सेकेन्डमा दौड पूरा गरेकी थिइन्।
यस हिसाबले खाली खुट्टै सीमाले निकालेको समय राम्रो मानिएको छ। ‘मसँग स्पाइक किन्ने पैसा छैन। मेरो परिवारको हैसियत मलाई जुत्ता किन्ने पनि होइन,’ टीकापुरको वीरेन्द्र विद्या मन्दिरमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत सीमाले भनिन्।
सीमा २०७१ सालदेखि राष्ट्रपति रनिङ सिल्डबाट एथलेटिक्समा प्रवेश गरेकी हुन्। उनले यसै वर्ष काठमाडौंमा आयोजना भएको राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा मात्र होइन, युथ जुनियर खेलमा पनि स्वर्ण जितेकी थिइन्। उनलाई भारतमा यसै वर्ष आयोजना हुन लागेको युथ जुनियर साफ गेमको छनोटमा पनि पारिएको थियो। तर, भारत र पाकिस्तानबीच बिग्रिएको सम्बन्धका कारण यो प्रतियोगिता हुन सकेन। उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो प्रतिभा देखाउन पाइनन्।
‘मलाई यहाँ भाग लिन आउँदैदेखि मनमा लागिरहेको थियो, दोस्रो नभए तेस्रो चाहिँ हुन्छु,’ सीमाले भनिन्।
सीमा पढाइमा पनि अब्बल छिन्। उनी आफ्नो कक्षाकी ‘फस्ट गर्ल’ हुन्। पढाइका साथै खेलकुदमा उनको दक्षता देखेर तीन महिनादेखि स्कुलले उनलाई निःशुल्क होस्टेलमा बस्ने र खाने व्यवस्था मिलाइदिएको छ।
उनी बिहान ४ बजे उठेर एक घन्टा अध्ययन गर्छिन्। र, ५ बजेदेखि नियमित ४ किलोमिटर दौडिने गरेकी छन्। उनलाई पहिले दौडिँदा बुबा इन्द्रबहादुर चौधरीले नखेल भन्थे। शिक्षाको अभावमा छोरी आफू जस्तै बन्छे कि भन्ने डर इन्द्रबहादुरको मनमा थियो।
तर, यसै वर्ष राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड र युथ जुनियर प्रतियोगितामा दोहोरो स्वर्ण जितेपछि सीमाका बुबा दंग थिए। झन् यतिबेला आफ्नो छोरीले एथलेटिक्समा सुदूरपश्चिमकै इज्जत राखेको खबरले उनी कति गर्वान्वित महशुस गरिरहेका होलान्!
बालोन डि’ओर अवार्डः एग्युरोसहित ११ खेलाडीले भोट नै पाएनन्
आर्सनललाई हराउँदै म्यानचेष्टर सिटी दोस्रो स्थानमा उक्लियो
अष्ट्रेलियामा अर्का नेपाली युवाको डुबेर मृत्यु December 27, 2016
Kantipur Samachar 26 December 2016 December 26, 2016
आईओएममा लगाइएको ताला २३ दिनपछि खुल्यो December 26, 2016
Wham! star George Michael has died December 26, 2016
कांग्रेसका मन्त्री र वरिष्ठ नेता बसेको मञ्च ढलेपछि ! December 26, 2016
'Kantipur Samachar' isacomplete online news portal. We are here to give news from all the leading Media companies as fast as we can. We are your reliable online reporter
Kantipur Samachar 2016 | All right reserved.